Rugby – «Top 16 Analamanga» : tsy nety hilalao ny Cosfa sy ny JSTA | NewsMada
Rugby – «Top 16 Analamanga» : tsy nety hilalao ny Cosfa sy ny JSTA
Tsy nahasakana ny fanohizan’Analamanga Rugby ny fanatontosany ny andro faharoa amin’ny fiadiana ny ho tompondaka ny sazy sy ny antso nataon’ny Malagasy Rugby. Tontosa, omaly alahady, tetsy amin’ny kianja Malacam Antanimena, ny andro faharoa amin’izany fifaninanana izany. Na izany aza, tsy raikitra ny fihaonana tokony ho nikatrohan’ny JSTA Ambondrona sy ny Cosfa (Bebaoty). Efa samy vita akanjo ny roa tonta ary efa hiomana hiakatra ny kianja, saingy nosakanan’ireo tomponandraikitra ao aminy tsy hanatanteraka ny fihaonana.
Miandry izay ho tohin’ity raharaha ity indray izany ny rehetra. Ny filohan’ny Analamanga Rugby kosa, nanambara fa mbola misy hatrany ireo mpanakantsakana nefa zon’ny ligy ny mampandeha ny fiadiana ny ho tompondaka.
Tontosa hatramin’ny farany kosa ny lalaon’ny TFMA Ankasina sy ny an’ny Stade olympique de l’Emyrne. Lavon’Ankasina, tamin’ny isa 17 no ho 11 ry zareo Tapany mena. Resin’ny USA Ankadifotsy, tamin’ny isa 11 no ho 6 kosa ny US Ikopa.
Lalao ara-pirahalahiana kosa ny an’ny Savony sy ny VTMA Antsalovana, izay nisolo ny toeran’ny UIRC, tsy afaka niatrika ny lalao ihany koa omaly. Lavon’ny Savony, tamin’ny isa 42 noho 12 ry zareo VTMA.
Hitohy amin’ny alahady ho avy izao indray ny andro fahatelo amin’ity fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga ity.